China Industrial Control Board Full Turnkey Assembly rụpụta na Factory | KAISHENG PCB
Mkpuchi ọla: Buru n'efu
N'ígwé: 2 PC akwa
Isi ihe: FR-4 tg135
Mkpuchi ọla: HASL DU EGO Ofkpụrụ nke Mmepụta: SMT + N'ígwé: 2 Layer PCB
Isi ihe: FR-4 tg135 Asambodo: SGS, ISO, RoHS MOQ: Mba MOQ
Dị derdị Solder: Free-Free (RoHS Dabara) Ọrụ Nkwụsịtụ: Mgbakọ olu PCB dị ala Ule: 100% AOI / E-test / Visual Test
Keywords: Ọrụ PCB Assembly, PCB Assembly Process, PCB Population, PCB Assembly Manufacturers, Turn-Key
Kedu ihe kpatara ịhọrọ ọrụ ọgbakọ PCB anyị?
1. Na ele mmadụ anya n'ihu Tụgharịa-Key, ị nwere ike ịtụ ndị PCBs na ele mmadụ anya n'ihu components. Anyị Injinia nwere ọtụtụ iri afọ nke PCB experiencegha ahụmahụ iji hụ na ọnyịnye nke akụkụ osobo circuit na n'ibu ije ije mkpa.
2. PCBFuture nwere ike inye elu mma iferi PCBs na e biri ebi sekit mgbakọ mgbakọ na nnọọ asọmpi ahịa na pụtara ìhè ọrụ na-adọ nnyefe.
3. Site na akụrụngwa na ahụmịhe anyị, anyị nwere ihe ọ ga - ewe iji gboo mkpa ọrụ gị site na echiche gaa na mmepụta yana bụrụkwa onye ọrụ injinịa kọmputa gị zuru oke n'agbanyeghị agbanyeghị ọrụ gị buru ibu ma ọ bụ obere.
Prototype PCB nzukọ
Turn-Key Circuit Board Assembly Ọrụ
Nnyocha nyocha na mgbakọ ikpeazụ
Otu esi emesi ihe eletrọniki bụ nke mbụ
1. must gaghị azụrụ ihe aka abụọ na nke adịgboroja dị ọnụ ala. Kwesịrị ịzụta site na ụlọ ọrụ mbụ ahọpụtara ahọpụtara ndị ọrụ na ọwa ndị ọzọ emere, dịka Dejie, Mouser, Arrow, wdg;
2. A ghaghị iji ihe ndị a zụtara tụnyere ihe mmepụta BOM iji hụ na akara na ihe nlereanya ahụ ziri ezi;
3. Ọ gwụla ma onye ahịa ahụ akọwapụtala ihe ọ chọrọ, a na-eji ihe ndị a zụrụ azụ emepụta nke ọma site n'aka ndị na-emepụta iwu, a na-ekwekwa nkwa ahụ;
4. A ghaghị enyocha ihe ndị a zụrụ iji kwado ihe ndị ahụ na-arụ ọrụ nke ọma;
5. A ga-echekwa ihe ndị a zụrụ n'ụzọ ezi uche dị na ya iji zere nsogbu dị mma dị ka iru mmiri n'ihi nchekwa nke ihe.
Olee otú ịhọrọ PCB nzukọ emeputa?
1. Ogo nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe iche.
2. awarenessmara banyere ọrụ.
3. Ahụmahụ ụlọ ọrụ.
4. Ọnụahịa nke PCBA nhazi dịtụ nghọta.
Anyị na-enye aka, na-ege ntị ma na-akwado nkwado iji mee ka ị merie n'ahịa asọmpi. Maka ọnụahịa anyị, ị ga-ahụ ha dị ọnụ ala. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ jụọ ajụjụ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụsales@pcbfuture.com , anyị ga-aza gị ASAP.
Nke gara aga: FPGA High-Speed ​​Circuit Board Assembly
Osote: Instrument Circuit Board Assembly
PCB Turnkey Nzukọ
turnkey PCB nzukọ